Ukurejista Kwabahlinzeki Bangaphakathi Komphakathi eSpain | Ezezimali Zomnotho
I-Registry ye-Intra-Community Operators eSpain
Ezweni lanamuhla lomhlaba jikelele kuningi imisebenzi yebhizinisi okwenziwa ngokwenza i- Irejista yama-Intercomunitaries Operators. Kepha ayini lawo marekhodi? Kuziphi izimo ezenziwa? Futhi kwenziwa kanjani ukubonisana kwemisebenzi eshiwo?
Embhalweni olandelayo sizophendula le mibuzo ukuze sicacise ngangokunokwenzeka ukungabaza okungavela maqondana ne- amarejista wabasebenza ngaphakathi komphakathi.
Ake siqale ngokunikeza impendulo esheshayo emibuzweni esemqoka evelayo maqondana nendaba, okokuqala Ngubani okufanele abe se- irejista yokusebenza kwangaphakathi komphakathi?. Impendulo yilezi: izinkampani zaseSpain noma ama-freelancers asebenza ne-Europe. Umbuzo wesibili uthi ngabe la marekhodi akhiqizwa nini? Uma wenza noma imuphi umsebenzi webhizinisi ngaphandle kweSpain, lokhu kusho ukuthi unabahlinzeki noma amakhasimende ngaphandle kwezwe.
Okulandelayo ukucacisa ukuthi noma ngubani onomsebenzi wezomnotho ngaphandle kweSpain angaphansi kokuhambisana ngokuphelele nokuthize izibopho zentela. Kulapho-ke ukubaluleka kwalolu daba, kuzinqubo zokuphatha okumele zenziwe kanye nasezibophezelweni zezimali esizibophezele kuzochazwa ngezansi.
1 Yini futhi ungayithola kanjani i-NIF - VAT yethu
2 Yenza inqubo yokuthola i-NIF - VAT
3 3 amathuba okuba kurejista yabasebenza emphakathini
4 Inqubo yesibili yokuphatha: ukwethulwa kwefomu 349
5 Imibuzo evela kubasebenza ngaphakathi
6 Ukuzibonela ngokwakho kokubhaliswa kwabasebenza emphakathini
Yini futhi ungayithola kanjani i-NIF - VAT yethu
Inqubo esizofakwa ngayo kwi irejista yabasebenza ngaphakathi emphakathini eSpain. Isihloko sesibili esizokhuluma ngaso kuzokwethulwa imodeli 349. Kamuva sizobhekana nezihloko zezinhlobo zokubonisana Abasebenza ngaphakathi komphakathi nokuthi ungayenza kanjani imibuzo enjalo.
Yenza inqubo yokuthola i-NIF - VAT
Enye ye izidingo zokuqala ukuze njengezinkampani noma abantu sikwazi ukuthenga noma ukuthengisa imikhiqizo nezinsizakalo ezivela ezweni elikwi-European Union ukuthi sibe ne-NIF - VAT; kuleli phuzu kubalulekile ukucacisa ukuthi i-NIF ivumelana ne-DNI yethu isebenzisa i- "ES" ekuqaleni, ukuze icacise ukuthi iyi- I-opharetha yangaphakathi yomphakathi waseSpain.
Kumele sethule inqubo phambi koMnyango Wezezimali, esizocela ukuthi asibhalise ngaphakathi kwe- Irejista yama-Intercomunitaries Operators. Ukwenza lokhu kusho ukuthi ukubhaliswa kuzosivumela ukuthi sibhaliswe njengomuntu ozisebenzayo noma inkampani ezothengisa noma ithenge kumuntu ongaphandle kwaseSpain, inqobo nje uma ise-European Union.
Indlela esiqala ngayo le nqubo ukuthumela i imodeli 036 (Kufanele kucaciswe ukuthi angeke kube u-037 kwazise sifuna ukubhalisela ukwenza imisebenzi yezomnotho ngaphandle kwaseSpain) uma sesiwugcwalisile lo mbhalo kumele siwethule kuMgcinimafa.
Ngemuva kokufaka isicelo sethu sokubhaliswa, uMgcinimafa uzosinika impendulo ebhaliwe, ekhombisa ukuthi samukelwa yini noma cha Abasebenza ngaphakathi komphakathi. Into ejwayelekile kunazo zonke ukuthi impendulo inguyebo. Lapho ukwamukelwa kwesicelo sethu sekuqinisekisiwe, sizoba ngaphakathi kwe- Irejista yama-Intercomunitaries Operators.
Kubalulekile ukucacisa, ngezansi, yini wonke amathuba okubhaliswa ku- Irejista yama-Intercomunitaries Operators.
3 amathuba lapho uku- Irejista yama-Intercomunitaries Operators
Ithuba lokuqala, futhi elinye elibaluleke kakhulu, ukuba ngaphakathi kwe- VIES uhlelo. Lolu hlelo lwezezimali lusinika amandla okulawula nobani esinabo ubudlelwane bezohwebo, ngokwazi ukuthi umhlinzeki wethu noma iklayenti lethu livunyelwe ukwenza umsebenzi wezomnotho phakathi kwamazwe ahlukene.
Le nzuzo izosivumela ukuthi silawule kakhulu umsebenzi wethu wezomnotho ngaphandle kweSpain, ngoba lapho senza ibhizinisi nabasebenza ngokuzimela noma izinkampani ezibhaliswe ngaphakathi Uhlelo lwe-VIES, kungenziwa ukuxolelwa kweVAT lokho kukhona ngaphakathi kwama-invoice ethu. Ukwenza imiphumela yezokuphatha nezomnotho ibe yinhle kakhulu futhi ibe lula.
Ithuba lesibili lokuthi ukuba kule rejista kusinikeza ukugcwaliseka kwama-invoice kumakhasimende ethu ase-Europe, ama-invoice azohamba ngaphandle kwe-VAT, isizathu salokhu ukuthi ukuthengisa okuphakathi komphakathi akuhambisani ne-VAT evela eSpain, kunalokho , Bazobhaliswa ne-VAT yezwe lapho iklayenti libhaliswe khona.
Lokhu okungenhla kufingqiwe ngeqiniso lokuthi, uma i-invoyisi yethu ingeyeklayenti elikuyo Irejista yama-Intercomunitaries Operators, kumthengisi, ukuthengisa kungukukhishwa kwe-VAT
Okunye okungenzeka ukuthi ukubhaliswa kulolu hlelo kusinika amandla okuthola ama-invoice avela kubahlinzeki bethu ku-European Union. Inzuzo enkulu yalokhu ukuthi imikhiqizo izobe ishibhile ngokusindisa i-VAT.
Lapha kungavela umbuzo olandelayo:Uma ngingabhalisiwe ohlelweni lwe-VIES Ungathenga noma uthengise imikhiqizo e-European Union. Futhi impendulo ukuthi, uma kungenzeka, noma kunjalo, konke ukunyakaza kuzokwenziwa ne-VAT yezwe elihambelanayo, ngakho-ke ukuthengiselana kuzobiza kakhulu.
Inqubo yesibili yokuphatha: ukwethulwa kwefomu 349
Imodeli 349 Yifomethi lapho kwenziwa khona isimemezelo ngakho konke ukuthengwa nokuthengiswa okwenziwe ngaphandle kweSpain, kwiklayenti noma umphakeli ngaphakathi kwe-European Union. Kuleli fomu sizothola isifinyezo semisebenzi yethu yangaphakathi komphakathi.
Kubalulekile ukusho ukuthi le fomethi ibaluleke kakhulu ekubuyiselweni kwentela, futhi uma ukhetha ukungalethi ifomu elishiwoyo, ungathola inhlawulo efeni. Ngaphezu kwalokho, ukuyethula kusinikeza ithuba lokukwazi ukuhlukanisa konke ukuthengiselana esikwazile ukukwenza futhi ngale ndlela singenza izinqumo zesikhathi esizayo mayelana nenkampani yethu.
Kuleli fomu uzothola konke ukuthengiselana kwethu okwenziwe endaweni kanye nalezo ezenziwa neklayenti noma umphakeli we-European Union. Futhi ukufayila kwenza ukukhokha intela kube lula kakhulu.
Imibuzo evela kubasebenza ngaphakathi
Okubaluleke kakhulu ukukhumbula ukuthi singakwazi ukufeza imibuzo ethile ohlelweni lwe-VIES, lokhu ukuze sibe nemininingwane eyanele ukuze sikwazi ukwenza izinqumo ezifanele mayelana nenkampani yethu noma umsebenzi wethu wezomnotho wesifunda.
Okokuqala sizohlaziya umbuzo wabasebenza ngaphakathi emphakathini eSpain. Ukuze sifeze lo mbuzo, imininingwane okufanele sibe nayo yi-NIF - VAT ye-intra-community opharetha. Uma sesinalo lolu lwazi singangena ohlelweni lwe-VIES bese singena kwi-NIF. Inhloso yalo mbuzo ukukwazi ukuqinisekisa ukuthi ubhalisiwe ohlelweni. Lo mbuzo uvame ukusetshenziswa yizinkampani noma abasebenza ngokuzimela abavela kwamanye amazwe e-European Union abafuna ukuqinisekisa ukuthi umphakeli noma iklayenti libhalisiwe ngaphakathi kwalolu hlelo.
Omunye umbuzo ongenziwa yilowo we- abahlinzeki be-intra-community abangewona amaSpanish. Ukuze senze lo mbuzo, imininingwane edingekayo yi-NIF - VAT kanye nesitifiketi se-elekthronikhi, kuzofanele futhi ukuthi sikhethe ikhodi yezwe (izinhlamvu ezimbili zokuqala ze-NIF - VAT)
Kumele kuqashelwe ukuthi lo mbuzo wenziwa ngqo ohlelweni lwezwe lapho ikhodi efakiwe ihambelana khona. Lapho umbuzo usuwenzile, isikrini sizosikhombisa umlayezo okhombisa ukuthi i-ejensi yentela iqinisekisa ukuthi i-NIF - VAT noma ayiveli njenge opharetha womphakathi.
Ukwenza lolu phenyo lapho sikhetha abahlinzeki bethu kuzuzisa ikakhulukazi, ngoba kusinikeza izinzuzo eziningana zentela. Futhi kuzosivumela futhi ukuthi sikwazi ukulawula kangcono ukuthengiselana kwethu namakhasimende ethu noma abahlinzeki ngaphakathi kwe-European Union.
Ukubonisana ngokuzimela kwe- Irejista yama-Intercomunitaries Operators
Ukubonisana kokugcina esizobhekana nakho ukuzibonela, okungukuthi, nathi ngokwethu sifuna ukuhlola isimo sethu ngaphakathi kohlelo lwe-VIES. Ukuze senze lokhu kubonisana sidinga i-NIF - VAT yethu kanye nesitifiketi se-elekthronikhi esivela kumfaki sicelo. Lo mbuzo uvame ukwenziwa ukuqapha isimo sethu ngaphakathi kohlelo.
Ngesikhathi sokwenza lo mbuzo, kufanele sifake inombolo ye-VAT ebhokisini elihloselwe lokhu, futhi umyalezo ozophuma uzoba ulwazi lwethu lapho kukhonjiswa khona ukuthi i-ejensi yentela inenombolo yethu njengomuntu osebenzela umphakathi.
Lolu lwazi lungasetshenziswa futhi ukuzethula njenge-freelancer noma inkampani elungiselelwe ukukwazi ukukhipha noma ukuthola ama-invoice ngaphakathi kohlaka lwentela. Futhi kuzosivumela ukufinyelela kumathuba angcono ebhizinisi
Yize ukuphathwa kwama-invoice ethu ngaphakathi Irejista yama-Intercomunitaries Operators Akulona udaba olulula ukulenza, iqiniso ukuthi kufanele unakwe ukuze ukwazi ukuqinisekisa izinto ezimbili, ukuthengiselana okulula nabanye opharetha ngaphakathi kwe-European Union, futhi okwesibili, ukubuyisa intela efanelekile ngokumelene nomgcinimafa .
Esinye sezincomo okufanele sicatshangelwe ukusebenzisa isoftware ekhethekile yokwakha ama-invoice, ngale ndlela singagwema amaphutha okungenzeka ekubuyiseni kwethu intela futhi sisivumele ukuphatha ukubalwa kwezimali zethu ngendlela elula kakhulu, ngaphezu kokwethula izinzuzo eziningi ngokusivumela ukuthi sigxile ekukhuleni kwenkampani yethu, senze izinqumo ngokususelwa ekuhlaziyweni kolwazi olwethulwe kwisoftware.
Indlela ephelele ye-athikili: Ezezimali Zomnotho » Ipolitiki yezomnotho » Inqubomgomo yezimali » I-Registry ye-Intra-Community Operators eSpain
Izibambiso ezingezansi kwentengo: Día, BBV, Acerinox
Isinqumo seNkantolo Ephakeme sithinta kanjani imali ebanjwayo?